Xa usana kwikhakiti, ukubonisana okufunekayo kunokuhlala kufunyanwa ngokubiza u-03. Ukuze ususe ikethi yomntu, baninzi bathunyelwa kwi-SES okanye kwiziko loxinzelelo.
Ukuba akukho nangoko ukufumana uncedo kwiziko lezonyango, ikethi kufuneka isuswe nguwe. Kufuneka kukhunjulwe ukuba amathuba okufumana i-encephalitis ekhutshwe ngekiti, i-borreliosis ekhutshwe ngekhaksi kunye nezinye izifo ezithengiswa ngamagqabha zixhomekeka ngokukodwa kwisantya sosulelo oluye lwangena kwi-tick bite. Ekuqaleni i-parasite isuswe, ingcono.
Kukulungele ukususa izibindi ngamanzi aqhotyoshelweyo okanye umbhobho wokugqitywa, nangona kunjalo, kulo mzekelo, ezinye izitya ziza kwenza. Iikitikiti zifanele zifakwe ngokugqithiseleyo malunga neproboscis, emva koko kufuneka zikhishwe ngokucophelela, zijikeleze kwicala lenkcazelo yalo. Ngokwenene, emva kokujika kwembini, uphawu luyakususwa ngokupheleleyo kunye neproboscis. Kwimeko apho uzama ukukhupha ikethi, ke kukho ukuphakama okukhulu.
Kukho izixhobo ezithile zokukhupha iikhikha. Ezi zixhobo zinenzuzo ebalulekileyo ngaphezu kwe-clamp kunye ne-tweezers ngenxa yokuba umzimba we-mite awufaki, kwaye iziqulatho ze-mite azifaki kwilonda, eyanciphisa kakhulu imingcipheko yokusuleleka kwiintsholongwane ezidluliselwa zizibonda.
I-Uniclean Tick Twister (UNICKLIN TEA TWISTER), esiyisixhobo sokukrazula iikhiza, sele sele ibonakalise. Ukuba akukho zibopho okanye idilesi ekhethekileyo, ungasusa uphawu xa usebenzisa umgca. Intambo eqinile kufuneka iboshwe kwiqhina, njengoko isondele kwi-proboscis yekhakiti, emva kokuba ibhokisi liyakususwa, ngelixa litshintsha ngokukhawuleza kwaye linyuka phezulu. Ukungavumelekanga ukuhamba ngokukhawuleza, kuba kulo mzekelo i-mite ilula nje.
Ukususwa kwekhakta kufuneka kwenziwe ngokucophelela, ungayifaki isidumbu sakhe, kuba iziqulatho ze-mite nazo zingena kwilonda kunye nezifo. Kwakhona kubalulekile ukuba ungagqithisi i-mite ngethuba lokususwa - inxalenye ehlala ekhumbeni ingabangela ukuvuvukala nokuxhaswa. Kufuneka kwakhona kukhunjulwe ukuba xa ikhanda le-mite likhutshiwe, inkqubo yokusuleleka isifo iqhubekeka ngenxa yenani elikhulu le-encephalitis ephawulwe ngamagciwane e-salivary glands, kunye nakwiidonsi ze-parasite.
Ukuba ngethuba lokususwa kwe-mite ikhanda layo liyakususwa, isayithi lokuxhamla kufuneka lisuswe nge-bandage okanye uboya bekotoni obunxiliswe ngotywala kwangaphambili, kwaye emva koko kuyimfuneko ukususa intloko ngenaliti enyumba.
Ngaloo nto, akufanele uphulaphule umntu kwaye usebenzise izicombululo zesoyile ukuze ukhuphe i-mite. Ioli inokugubha iminyango yokuphefumula ye-parasite, kwaye iya kufa kwesikhumba. Emva kokususwa kwe-mite, isikhumba siphathwa nge-tincture ye-iodine okanye utywala. Ukusetyenziswa kokugqoka akudingeki.
Ngaphandle kokukhawuleza kwekhakiti elifutshane, kukho umngcipheko wokusuleleka kwiintsholongwane ezahlukeneyo eziphathwe ngecala. Iikheti zisebenza njengesiqhelo sezifo ezininzi, ngenxa yoko, emva kokususa uphawu, kufuneka kugcinwe uphando malunga nokusuleleka kwezifo. Oku kuqhutywa ikakhulu kwizifo ezithathelwanayo esibhedlele.
I-mite ifakwa kwisitya esincane seglasi kunye nenqanawa yoboya bekoton, ehlanjululwa ngamanzi. Kubalulekile ukuvala isitya nge-stopper okanye kwisibhambathiso kwaye uyigcine kwindawo ebandayo - kungenzeka kwifriji. Ukuqhuba i-diagnostic microscopic ye-tick ithayimfuneko ukuyihambisa kwi-laboratory. Ukuqhuba uvavanyo lwe-PCR, iindawo ezihlukeneyo zeekhiza nazo zisetyenziswa. Nangona kunjalo, indlela yesibini ayiqhelekanga nakwiidolophu ezinkulu.
Kubalulekile ukuqonda ukuba ubukho bentsholongwane kumthikiti asithethi ukuba umntu uya kugula. Uhlalutyo lwekhaksi luyimfuneko ukuzinza kwiziganeko ezingalunganga kunye nokuqapha - xa ufumana umphumo omuhle.
Indlela echanekileyo yokumisela ubukho besifo kukunikezelwa kwegazi i-anilysis. Igazi akufanele lithathwe ngokukhawuleza emva kokulinywa kwekhaksi - uhlalutyo alubonakalisi nto. Kungekudala emva kweentsuku ezilishumi emva koko, ukuhlolwa kwegazi ngezifo ezinjenge-encephalitis ne-borreliosis nge-PCR ezinokuthi zenziwe ngee-ticks zingenziwa, kwiiveki ezimbini emva kokuluma, kwiintsholongwane kwi-tick-borne encephalitis virus, kunye neenyanga ezizayo emva kwe-antibodies eBorlia.
Into engenakuyenza ngexesha lokuya esikhathini
Izilwanyana zorhulumente zokulala
Ukulala nokulahlekelwa isisindo - ngokwenene!
Flatbread ne zityalo
Umvuzo wokuqala woBumnandi bezeMpilo kunye neMpilo
I-pancake ekhangayo kunye nobisi omuncu: zokupheka zangaphambili kunye neendlela zakudala
I-Biography yomdlali we-actress u-Alena Bondarchuk
Uthande ethuneni: njani ukuwela emthandweni nomntu
Inyaniso malunga nama-lens
Oko kufuneka uyenze ngaphambi kokuba ufumane umntwana
Izigulane zezilwanyana zesifo somqala
Indlela yokuba yindodana, ukuba umama ufumene enye indoda
Uthando nobudlelwane obuselula